Air Canada dia nanambara ny drafitra ho an'ny fiverenan'ny mpiasa ao aminy
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Air Canada dia nanambara ny drafitra ho an'ny fiverenan'ny mpiasa ao aminy
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Air Canada dia nanambara ny drafitra ho an'ny fiverenan'ny mpiasa ao aminy.
Manomboka ny 15 Novambra, ireo mpiasan'ny Air Canada izay miasa ivelan'ny toeram-piasana amin'izao fotoana izao dia hanomboka fiverenana any amin'ny toeram-piasana, miaraka amin'ny safidy hanohy ny andro voatondro miasa lavitra.
Ny politikan'ny fanaovana vaksiny tsy maintsy atao dia mitaky ny mpiasa rehetra ao amin'ny zotram-piaramanidina mba hanao vaksiny tanteraka.
Entanina mafy ny mpiasa hanao saron-tava isaky ny ivelan'ny toeram-piasany manokana na rehefa mifandray amin'ny hafa.
Ny mpitsidika rehetra sy izay rehetra miditra ao amin'ny tranon'ny orinasa dia takiana amin'ny fanaovana vaksiny tanteraka.
Air Madagascar nilaza androany fa namoaka ny Fiverenana any amin'ny drafitry ny toeram-piasana izy ireo mba hamindrana ireo mpiasa miasa lavitra any amin'ny toeram-piasana, manomboka ny 15 Novambra. safidy amin'ny asa lavitra mba hanomezana fahafaham-po sy fahatokisana ny mpiasa rehefa miverina amin'ny asa fanaony talohan'ny areti-mifindra.
“Raha ny mpiasa eo aloha amin'ny Air Madagascar Nanatrika ny asa nanatanteraka ny fandidiana nandritra ny areti-mifindra, izay isaorana sy fiderana azy ireo aho, nanomboka tamin'ny martsa 2020 dia maro be no niasa lavitra araka ny torolàlana Federal Public Health. Amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny enta-mavesatra mianjera eo amin'ny firenena, Air Madagascar's politika tsy maintsy atao vaksiny any amin'ny toeram-piasana, ary ny fepetra ara-pahasalamana hafa momba ny orinasa, dia azo atao ny manomboka miverina amin'ny laoniny ao amin'ny birao ary manohy ny fiainana ara-dalàna kokoa. Ny drafitray dia mandray fomba fiasa voalanjalanja, mahafeno ny filan'ireo maniry ny hiasa indray miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy sy ny hafa izay mety maniry ny hanohy, noho ny antony manokana na matihanina, miasa lavitra ny andro sasany amin'ny herinandro, "hoy i Michael Rousseau, filoha. ary Lehiben'ny Mpanatanteraka ny Air Madagascar.
"Ho an'ny olona tsirairay, orinasa na fikambanana rehetra mba hahatratrarana ny tanjony manontolo dia mitaky fifandraisana sy fifandraisana manokana. Izany dia mahatonga ny fiverenan'ny Kanadiana any amin'ny toeram-piasana ho dingana ilaina amin'ny fanarenana ny fiarahamonintsika sy ny toekarentsika amin'ny fiantraikan'ny valan'aretina. Amin'ny maha-firenena antsika dia afaka ary tsy maintsy manomboka manohy ny fanaontsika talohan'ny areti-mifindra isika, indrindra fa ny avo vaksiny ny tahan'ny, ny politikam-pahasalamam-bahoaka mahomby ary ny fahafoizan-tena nataontsika rehetra mba handresena ny COVID-19 dia namorona ny fepetra hanaovana izany soa aman-tsara. ”
Nanomboka ny 15 Novambra, ireo Air Madagascar Ireo mpiasa izay miasa ivelan'ny toeram-piasana amin'izao fotoana izao dia hanomboka fiverenana nahazo diplaoma any amin'ny toeram-piasana, miaraka amin'ny safidy hanohy ny andro voatondro miasa lavitra. Mba hiantohana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpiasa ao amin'ny toeram-piasana:
A politika fanaovana vaksiny tsy maintsy atao mitaky ny mpiasa mavitrika rehetra mba hanao vaksiny tanteraka;
Ny mpitsidika rehetra sy izay rehetra miditra ao amin'ny tranon'ny orinasa dia takiana amin'ny fanaovana vaksiny tanteraka;
Entanina mafy ny mpiasa hanao saron-tava isaky ny ivelan'ny toeram-piasany manokana na rehefa mifandray amin'ny hafa;
Ilaina ny fanalavirana ara-batana raha azo atao;
Mbola atolotra ny fandaharan'asa fitiliana an-trano ary ampirisihina ny fampiasana azy;
Mbola hisy hatrany ny fitaovana fanadiovana tanana sy fanasan-tanana.